မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ်: Wordfinder(Saya U tun sein )
Wordfinder(Saya U tun sein )
လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုမေးချင်ရင်How old is she?သို.မဟုတ်What age is she?စသဖြင့်မေးနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်တဲ့တုံ.ပြန်မှုကတော့She is 18 years old.သို.မဟုတ်ခပ်တိုတိုပဲ၊She is18.လို.ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်Her age is 18.လို.တော့ဖြေလေ့မရှိပါဘူး။
'a 17 years oldboy'လို.ပြောရင်မှားပါတယ်။'a 17-year-old boy'လို.hyphenခံရေးရင်yearမှာ's'မပါ
အသက်ကိုခန်.မှန်းတဲ့အခါoddဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီး၊ခန်.မှန်းပြောဆိုကြသေးတယ်။"How old is he?"
"I don't know,thirty-odd,I should guess."(၃၀)သာသာရှိမယ်လို.ခန်.မှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်ပိုင်းနဲ.လူကြီးပိုင်းရယ်လို.အကြမ်းဖျင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး၊Younger generationနဲ.older generationဆိုပြီး
နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောကြပါတယ်။There is not much interest in politics among the younger generationပိုပြီးတိတိကျကျဖော်ပြချင်ရင်တော့age-groupဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပြီး၊ပြောနိုင်ပါတယ်။I think
the rap music is aimed at the 11-16 age group.